window 7_ 64 bit & 32 bit Driver [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Window Problems » window 7_ 64 bit & 32 bit Driver [Problem]
1 window 7_ 64 bit & 32 bit Driver [Problem] on 22nd February 2010, 9:12 am
window 7_64bit က software တော်တော်များများနဲ့ မကိုက်ဘူးနော်... အခုကျနော် ၀ယ်ထားတဲ့စက်က window7တစ်ခါတည်းပါပြီးသားပါ... အခုအဲဒိကောင်ကို ကျနော် 32 bit ပြန်ပြောင်းမလို့... အဲဒါ Driver တွေက ဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ် တူတူပဲလား.. ဆိုတာသိချင်ပါတယ်.. တူတူပဲဆိုရင်တော့ တစ်ခါတည်း အခုပြောင်းလိုက်တော့မယ်... မတူဘူးဆိုရင် Driver တွေကပြန်ရှာရဦးမယ်... အဲဒါတစ်ချက်လောက် နားလည်တဲ့သူတွေရှင်းပြပေးပါဦး.. ကျနော် ရမ်းမတီးချင်လို့...
2 Re: window 7_ 64 bit & 32 bit Driver [Problem] on 22nd February 2010, 5:02 pm
32 bit နဲ့ 64 bit ကတော့ တူနိုင်ဘူးလေ။
Driver ကို စက်ဝယ်တဲ့ site ကနေ Down လို့ရမှာပါ
3 Re: window 7_ 64 bit & 32 bit Driver [Problem] on 22nd February 2010, 5:11 pm
ဟုတ်ကဲ့ ... ဒါဆိုဆွဲထားလိုက်ဦးမယ်... .. ကျေးဇူးပဲနော်....
4 Re: window 7_ 64 bit & 32 bit Driver [Problem] on 24th February 2010, 9:54 am
ကျနော့်ရဲ့ laptop အတွက် Driver တွေလိုချင်လို့ပါ... အခုကျနော်ဝယ်လိုက်တုန်းက window7(64 bit) နဲ့ Driver ခွေတွေပဲပါလာတယ်...
64 bit က software အစုံကို တင်လို့မရဘူး... သူကနည်းနည်းရွေးတယ်... အဲဒါနဲ့ ကျနော် (32 bit) ကိုပြောင်းတင်မလို့ အဲဒါ Driver ခွေတွေလိုနေပါတယ်ဗျာ...
window7က Driver တွေတော်တော်များများကို auto သိပေမယ့် သူမသိတာက Audio ရယ်၊ webcam ရယ်၊ နောက် Graphic တွေအတွက်တော့ မပါလာဘူးထင်ပါတယ်...
နောက်ကျနော်မသိတာဘာတွေရှိသေးလဲတော့မသိဘူး... လောလောဆယ်ကျနော်ထင်တာလေးတွေကိုရေးပြတာပါ... အဲဒိတော့ အဲဒါတွေအတွက် ကျနော် 32 bit နဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ Driver တွေလိုချင်ပါတယ်...
အော်.. ကျနော့် စက်က Dell inspiron 1564 ပါ..... သူက OS ကို window 7_64bit ပါပြီးသားပါ... အဲဒါလေးကို ရှာပေးပါဦးနော်....
ဒါနဲ့တစ်ခါတည်း စကားမစပ်လေး ကျနော့်စိတ်ထဲထင့်နေတာလေးကိုမေးမလို့ပါ.. ဒီမှာပဲမေးလိုက်တော့မယ်.... ကျနော်စက်က
Dell Inspiron 1564 (window 7_64 bit ပါပြီး)
CPU - Core i3 330M
Graphic - 512 Dedicated (ဒါပေမယ့် Graphic ကိုသွားကြည့်တော့2GB ရှိနေတယ်)
ဒါက အကြမး်ဖျင်းပေါ့ဗျာ... အဲဒါကိုမှ ကျနော်ပေးရတာ US 735 ပဲပေးရတယ်... သူ့နဲ့ အဲလိုတူတဲ့တခြား HP ကတော့ စျေးက လန်ထွက်နေတာပဲ... US 1000 ကျော်တယ်... အဲဒါဘာလို့လဲမသိဘူး..
ကျနော်လညး် ကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲဝယ်လိုက်တယ်... သူ့ထက် နိမ့်တယ်လို့ထင်ရတဲ့ Core2Duo တို့ဘာတို့တောင် အဲဒိထက် စျေးများတယ်... တချို့ဆိုစျေးတူတယ်... အဲဒါဘာကြောင့်လဲမသိဘူး...
ကျနော်ကို နည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပေးပါဦးနော်... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....
5 Re: window 7_ 64 bit & 32 bit Driver [Problem] on 24th February 2010, 6:57 pm
အခုကျနော် window7(32 bit) ကိုတင်လိုက်ပြီ... တခြားတော့ ဘာမှထွေထွေထူးထူးပြန်လုပ်စရာမလိုဘူး... ဒါပေမယ့် webcam က ရှိနေပေမယ့် အရင်လို သူ့ကို ဖွင့်လို့ရတဲ့ Default program လေးမရှိတော့ဘူး... သူ့ကိုဘာနဲ့သွားပြီးကြည့်ရမလဲဟင်... ပြီးတော့ Graphic က အရင်2GB (2222 MB) ကနေ အခု (1785 MB ) ပဲကျန်တော့တယ်... အဲဒါဘာဖြစ်လို့လဲဟင်... RAM ကနေပြန်ပြီး share လုပ်ထားလို့လား... share တယ်ဆိုရင်ကော အခုပြန် share လို့ရလားဟင်... တခြားကတော့ ဘာမှအခုလောလောဆယ် error မရှိဘူး... သိသူများပြောပေးပါဗျာ... ကျနော်စက်လေးကို ဒီည အပြီးလုပ်လိုက်ချင်လို့ပါ.... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...
6 Re: window 7_ 64 bit & 32 bit Driver [Problem] on 25th February 2010, 9:48 am
ko mars ရေ။
ကျွန်တော်ဟာ လည်းအဲ့လိုပဲဗျ။ graphic 512 MB ပါရင် windows732-bit မှာ 1024 GB ပေါ်တယ်ဗျ။
အဲဒါက windows7 ကြောင့် ဖြစ်တာဗျ။
window vista မှာလည်း ဇြစ်တယ်ဗျ။
CMOS ထဲ ၀င်ပြီး ကြည့်ကြည့်ပါလားဗျာ။
desktop motherboard မှာတော့ system share memory ဆိုပြီးပါတယ်ဗျ။
Please check your CMOS.
software တွေကတော့ disk manager ထဲက update driver မှာ စမ်းကြည့်ပါလားဗျာ။
webcam က နဂိုက ဘယ် software နဲ့ သုံးတာလဲဗျ။
အများအားဇြင့် Driver Software ထဲက install လုပ်ရတယ်ဗျ။
အကို driver software ကို dell website မှာ download ရတယ်ဗျ။
ကဲ test ကြည့် ပါဗျာ။
7 Re: window 7_ 64 bit & 32 bit Driver [Problem] on 25th February 2010, 9:54 am
ကျေးဇူးပဲ... စမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်... မရရင်ပြောမယ်လေ....
8 Re: window 7_ 64 bit & 32 bit Driver [Problem] on 26th February 2010, 3:34 pm
ကျွန်တော် ဆီ ၁ မျိုး ရှိပါ တယ် corba software လေးပါ လိုအပ်ရင်တော့ လာယူနိုင်ပါတယ် သူငယ်ချင်း လာမယ်ဆို ရင် မေးလ် အရင်ပို့ ထားပါ ကျွန်တော် မေးလ် က [You must be registered and logged in to see this link.] ပါ အဲ့ဒီ အခွေ လေး ထဲ မှာ driver ပေါင်း 75000 လောက်ပါတယ်
9 Re: window 7_ 64 bit & 32 bit Driver [Problem] on 28th February 2010, 1:46 pm
ကူညီမယ်ဆိုလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... လာလို့ကတော့ မရဘူးဗျ... ကျနော့်စက်ကအခုတော့ အားလုံးအဆင်ပြေနေပါပြီ... အခုကျနော်ရှာလို့မရသေးတာ... Dell Dock ဆိုလား မသိပါဘူးဗျာ... အဲဒါလေးရရင် အဆင်ပြေမယ်ပြောတယ်... ကျနော်အခုထိတော့ ကြိုးစားနေတုန်းပဲ... ဒီနေ့လည်း အားတုန်းလေးလုပ်လိုက်ဦးမယ်...
10 Re: window 7_ 64 bit & 32 bit Driver [Problem] on 9th June 2010, 4:56 pm
ကို mars လိုနေတာ လို့ထင်ပါတယ်........
Dell Dock Setup_Eng လေးပါ......
အဆင်ပြေအောင်လို့ ifile လင့်ကနေတင်ပေးထားပါတယ် ခင်ဗျာ.......
11 Re: window 7_ 64 bit & 32 bit Driver [Problem]